ဆို့နစ်သည်ထက်ပိုသော - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆို့နစ်သည်ထက်ပိုသော (ကိုရီးယား: 슬픔보다 더 슬픈 이야기 ) သည် ၂၀၀၉ ခုတွင် ရုံတင်သော တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ကဗျာဆရာ ဝန်တေယွန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဗွေဆော်ဦးရိုက်သော ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ကွမ်ဆောင်ဝူး၊ လီဘိုယန်း၊ လီဘုံဆူးတို့ အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ကြသည်။  ၂၀၁၈ ခုတွင် ဤဇာတ်ကားကို ယခုအမည်ဖြင့်ပင် ထိုင်ဝမ်က ပြန်ရိုက်သည်။
မိဘမဲ့များဖြစ်သော ကေနှင့် ကရင်တို့မှာ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဆုံသည်။ ကေမှာ ဖခင်ဖြစ်သူ ကင်ဆာရောဂါဖြင့်လွန်သည်နောက် မိခင်က ပညာသင်နိုင်သောငွေပေးကာ ချန်ထားခံရသူ ဖြစ်သည်။ ကရင်မှာ ကျန်မိသားစုဝင်တို့က ကားမတော်တဆကြောင့် တကောင်ကြွက်ဖြစ်သူတည်း။ လေပေးဖြောင့်ကာ ကေ၏အိမ်တွင် စုနေသည်။ ချန်ထားခံရသည်ကို ကြောက်သော ကရင်၏စိတ်ကို သိသဖြင့် ကေသည် သူ၏ မျိုးရိုးလိုက်သော ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းကို ထုတ်မပြောခဲ့။ လူကောင်းတယောက်နှင့် လက်ထပ်ရန်သာ အစဉ်တိုက်တွန်းသည်။ နောက် ကရင်က ဆရာဝန် ဂျူဟွန်းကို သဘောကျကြောင်း အသိပေးလာသောအခါ ကေ အသည်းကွဲ၏။ သို့သော် သင့်တော်သောကြင်ဖော်ကို ရှာနိုင်သဖြင့် တဘက်တွင်လည်း ကျေနပ်သည်။ ကရင်အလိုကျ ဂျူဟွန်းနှင့်စေ့စပ်ထားသူ ဂျန်နာကို စေ့စပ်မှုဖျက်ရန် ကေက တောင်းဆိုသည်။ ဂျန်နာက သူ၏ဓာတ်ပုံပြပွဲအတွက် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံလျှင် သဘောတူမည်ဟု ဆို၏။
နောက်ပိုင်းတွင် ကရင်သည် သူရေးသောသီချင်းသည်ကို ကေ ကြိုက်မကြိုက်သိရန် ကေ၏ပစ္စည်းများကို ရှာစဉ် ကေသောက်နေကျဆေးကို တွေ့သည်။ စုံစမ်းရာ ထိုဆေးမှာ ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်လူနာများအတွက် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အစောပိုင်းက ကေ၏ဆန္ဒမှာ သူ လူကောင်းတယောက်နှင့်လက်ထပ်ရန်ဟု သိထားသည့်အတွက် ဂျူဟွန်းနှင့် ချစ်ယောင်ပြုသည်။
ဇာတ်သိမ်းတွင် ကရင်သည် ဂျူဟွန်းအားတောင်းပန်ကာ ကေ မသေခင်အထိ အတူသွားနေသည်။ ဂျူဟွန်းက အောက်မေ့ဖွယ်အဆောက်အဦသို့ သွားလည်သည့်အခါ ကင်ဆာနှင့်လွန်သည့် ကေ၊ ကေ သေသည်နောက် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားသော ကရင်တို့၏ အရိုးပြာအိုးနှင့်ဓာတ်ပုံကို တွေ့ရ၏။
ကန်ချောဂူ သို့ ကေ အဖြစ် ကွန်ဆောင်ဝူး
အွန်ဝူး သို့ ကရင် အဖြစ် လီဘိုယန်း
ချာဂျူဟွန်း အဖြစ် လီဘုံဆူး
ဂျန်နာ အဖြစ် ဂျန်အေယွန်
↑ Lee Hyo-won. "`More Than Blue' Is Poetic, Luminous". The Korea Times,5March 2009.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆို့နစ်သည်ထက်ပိုသော&oldid=689522" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။